शिक्षकलाई ४५ मिनेट ट्वाइलेटमा थुनेका कमेडिन सन्दिप क्षत्रिका यस्ता छन् रोचक तथ्य – Etajakhabar
शिक्षकलाई ४५ मिनेट ट्वाइलेटमा थुनेका कमेडिन सन्दिप क्षत्रिका यस्ता छन् रोचक तथ्य
काठमाडाैं – सन्दीप क्षेत्री नेपाली हास्यव्यंग्य क्षेत्रमा परिचित नाम हो । सानै उमेरदेखि अरूलाई हँसाउने कला भएका उनी विद्यार्थी जीवनमा आफू निकै बदमास भएको बताउँछन् । वास्तवमा उनको विद्यार्थी जीवन कस्तो रह्यो त ? गज्जबका महेश तिमल्सिनालाई उनले सुनाएका छन् ।
पहिलो अक्षर लेख्न बुवाले सिकाउनुभयो मलाई पहिलो अक्षर लेख्न मेरो बुवाले सिकाउनुभएको हो । त्यसैले मेरो पहिलो शिक्षक मेरो बुवा नै हुनुहुन्छ । उहाँले मेरो हात समाएर चकले स्लेटमा लेख्न लगाउनुहुन्थ्यो । जसले गर्दा मैले क, ख लेख्न उहाँबाट नै सिकेँ ।
माउन्ट भ्युले अनुशासन र क्रिकेट दुवै सिकायो मेरो बुवा प्याथोलोजिस्ड हुनुहुन्छ । त्यसैले गर्दा उहाँको जागिर जहाँ–जहाँ सरुवा हुन्छ हामी त्यहीँ गएर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । जसले गर्दा म चार वर्षको उमेरमा सुर्खेत गएँ । त्यहाँ उषा बालबाटिका स्कुल थियो । त्यहीँबाट मेरो स्कुलेजीवन सुरु भयो । त्यहाँ म शिशु कक्षामा भर्ना भएँ । त्यसपछि म दाङको माउन्ट भ्यु स्कुलमा फेरि २ कक्षामा गएर भर्ना भएँ । त्यहाँ मैले ५ कक्षासम्म पढेँ । त्योचाहिँ दार्जिलिङका मानिसले खोलेको स्कुल हो । त्यसैले त्यहाँ शिक्षकशिक्षिका सबै दार्जिलिङका नै थिए । जसले गर्दा दार्जिलिङमै बसेर पढेकोजस्तो महसुस हुन्थ्यो । म फुटबल राम्रो खेल्थेँ, क्रिकेटमा चाहिँ खासै रुचि थिएन । तर, त्यो स्कुलमा क्रिकेट खेल्नै पथ्र्यो । जसले गर्दा मैले कक्षा ५ पढ्दादेखि नै क्रिकेट खेल्न सिकेँ । यसको साथै त्यो स्कुलमा विद्यार्थीलाई निकै अनुशासनमा राखिन्थ्यो । जसले गर्दा मलाई अनुशासन पनि सोही स्कुलले सिकायो ।
०५५ सालमा एसएलसी दिएँ त्यहाँ ५ कक्षासम्म अध्ययन गरेपछि म फेरि वीरगन्ज आएँ । त्यहाँको मेरीगोल्ड स्कुलमा आएर ६ कक्षामा भर्ना भएँ । त्यहाँ पनि दार्जिलिङका नै शिक्षक थिए । मैले ६ र ७ त्यहाँ पढेँ । त्यसपछि ०५५ सालमा त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएँ । म प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएको थिएँ ।
वादविवाद र खेदकुदमा सधैँ प्रथम मेरीगोल्ड स्कुलमा रवि कोइराला नामका प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले विद्यार्थीलाई धेरै पिट्नुहुन्थ्यो । यतिसम्म कि रवि सरले कोही विद्यार्थीलाई अफिसमा बोलाउनुभयो भने अब हाम्रो काल आयो भन्ने सोच्थ्यौँ । उहाँलाई हामीले भुँडे भन्थ्यौँ । म पनि स्कुलको एकदमै छुद्र विद्यार्थी थिएँ । मैले पनि उहाँको पिटाइ धेरै खाएँ । म बदमास भए पनि पढाइमा भने राम्रो थिएँ । विद्यालयमा आयोजना हुने वादविवाद, खेलकुद, नाचगानलगायतका थुपै्र कार्यक्रममा मै प्रथम हुन्थेँ ।
ओभरसियरमा नाम निकालेँ, तर पढिनँ एसएलसी दिएपछि सबैले डाक्टर, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ । त्यसैले मैले पनि पुल्चोक इन्जिनियरमा आएर ओभरसियरमा नाम निकालेँ । नाम निस्केपछि बुवाले फोन गरेर तँ इन्जिनियर नै बन्ने हो त भनेर सोध्नुभयो । तर, मेरो डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने सोच थिएन । अरूले भनेको सुनेर नै म त्यतातर्फ लागेको थिएँ । पछि मैले इन्जिनियर पढ्ने सोच बनाइनँ । त्यसपछि म वीरगन्ज फर्किएर वीरगन्ज कमर्स क्याम्पसमा भर्ना भएँ । त्यसपछि मेरो कलेजको यात्रा सुरु भयो । जहाँबाटै मैले स्नातक तहसम्म उत्तीर्ण गरेँ । मैले स्नातकोत्तर भने काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसबाट गरेको थिएँ ।
परिवारको दबाब थिएन परिवारले मलाई डाक्टर, इन्जिनियर अथवा यस्तो बन्नुपर्छ र यही विषय पढ्नुपर्छ भनेर कहिल्यै दबाब दिएन । मेरो बुवाममी नै बुझ्ने हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले तँ जुत्ता बनाउने मान्छे बन्, तर नम्बर वान बन् भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले म यहाँसम्म आइपुग्नु मेरो बुवाममीको नै देन हो ।
विद्यार्थीकालमा निकै बदमास थिएँ विद्यार्थी जीवनमा म ज्यादै बदमास थिएँ । म स्नातक तहमा अध्ययन गर्दा कलेजमा नन्दु दाइको क्यान्टिन थियो । त्यहाँ हामी चियाखाजा खान जान्थ्यौँ । मचाहिँ त्यहाँ गएर दूध खान्थेँ । अनि त्यो दूध खाएर गिलासचाहिँ बगैँचामा फालिदिन्थेँ । मलाई धेरैजसोले माया गरेर राजा भन्थे । नन्दु दाइले राजा दूध त खायौ, तर गिलासचाहिँ कता फाल्यौ भन्नुहुन्थ्यो । मचाहिँ मैले फालेको होइन भनेर ढाँट्थेँ ।
एक पिरियडसम्म शिक्षकलाई ट्वाइलेटमा थुनेँ म निकै बदमास थिएँ । मलाई एकजना शिक्षकले सधैँ सो क्युट भनेर मेरो गाला चिमोट्नुहुन्थ्यो । तर, मलाई मन पर्दैनथ्यो । एक दिन मैले त्यो सर ट्वाइलेट गएको देखेँ । अनि ट्वाइलेटमा बाहिरबाट चुकुल लगाइदिएँ । त्यो सर एक पिरियडसम्म थुनिनुभएको थियो ।
राजनीतिमा रुचि थियो, तर कतै संलग्न भइनँ म सानैदेखि प्राइभेट स्कुलमा पढेँ । त्यस्तै कलेज पनि प्राइभेट नै भयो । त्यसैले मैले राजनीतिमा संलग्न हुने मौका नै पाइनँ । मलाई राजनीतिमा चासो थियो र छ पनि । तर, कुनै पनि पार्टीको संगठनमा आबद्ध भइनँ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
कक्षा १० मा एउटी केटीलाई मनपराउँथेँ कक्षा १० मा अध्ययन गर्दा मलाई एउटी केटी मन परेको थियो । मलाई पनि कसैले मनपराउँथे होला । तर, कसैसँग गहिरो माया बसेन ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १७, २०७४ समय: ८:०९:५८
नाम कहलिएका पण्डितलाई यि हट नायिकाले घरमा नै बोलाएर एक्कासी अंगालो मारीन् र ड्रेस चेन्ज गरेर आउँछु भन्दै…
नायिका छोरीले निर्देशक बाबुका कस्ता कुरा बाहिर ल्याउन लेख्दैछिन् किताब
‘कृ’ को सिक्वेल बन्ने पक्का, यूकेमा छायांकन गरिने फिल्ममा अनमोल नै दोहोरिने
विपुल क्षेत्रीको गीत रामसाईलीको कभर गीत नयाँ साजसज्जा सहित बेलायतबाट ल्याए गायक अनिशले
तपाईलाई थाहा छ ? यस्ता थिए प्राचिनकालका ७ अनौठा सेक्स प्रथा !
बस पल्टिँदा ज्यान गुमाएकाहरुको परिचय खुल्यो
काठमाडौँबाट सुर्खेतमा सिधा हवाई सेवा शुरु हुने, बुद्धएयरले वैशाख १ देखि उडान शुरु गर्ने
सभापति देउवामाथि खनिए काँग्रेसका चि चर्चित नेताहरु, सानेपामा भयो चर्काचर्की
देश बनाउका लागि म कृतसंकल्पित छु, हाम्रो टिमको अठोट छ, मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ : प्रधानमन्त्री ओली
कसले बिष्फोट गरायो लहानमा प्रेसरकुुकर बम ? विष्फोटबाट बालक सहित छ घाइते
बन्द भएको २६ वर्षपछि बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान शुरु, यि एयरलाइन्सले दिने भए सेवा